Novotel Yangon Max |5Star Hotel in Yangon, Myanmar | Official Site
Novotel Yangon Max - Family & Business trip hotel
သင့်ကိုနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က သင့်ရဲ့အပန်းဖြေ ကောင်းကင်ဘုံငယ်
အချိန်ယူပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်လေ။ NOVOTEL YANGON MAX မှာတည်းခိုနေထိုင်ပြီး ကိုယ့်အိမ်မှာ နေသလိုမျိုး သက်တောင့်သက်သာ စိတ်လက်အပန်းဖြေပြီး အားအင်သစ်တွေ ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါ။
ပြည်လမ်းမကြီးပေါ် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ မိနစ်(၂၀)လောက် အကွာအဝေးမှာပဲ တည်ရှိတဲ့ ACCOR အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကြယ်ငါးပွင့် အဆင့်မြင့် NOVOTEL YANGON MAX ဟိုတယ်ဟာ နိုင်ငံခြားသံရုံးအများစုနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ ၁၀ ကီလိုမီတာ ပဲကွာဝေးတဲ့ အချက်အချာနေရာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်း ၄ ကီလိုမီတာ လောက်ပဲဝေးပြီး သမိုင်းဝင်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်နှင့်လည်း နီးတဲ့အပြင် JUNCTION SQUARE စျေးဝယ် စင်တာနှင့်လည်း လမ်းလျှောက်သွားရုံအကွာအဝေးတွင်းမှာသာတည်ရှိပါတယ်။
လူကြီးမင်းအနေနဲ့ NOVOTEL YANGON MAX ဟိုတယ်မှာ အကောင်းဆုံး တည်းခိုနေထိုင်မှု အတွေ့အကြုံကို ခံစားရရှိ နိုင်ရန်အတွက် လူကြီးမင်းရဲ့ အချိန်တွေကို ညီညွှတ်မျှတအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ဘက်က နားလည်ပါတယ်။
အလုပ်ကိစ္စကြောင့် ခရီးထွက်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အပန်းဖြေနားနေဖို့ ခရီးထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြီးမင်းအတွက် ရွေးချယ်စရာတွေများပြားလှတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အပန်းဖြေဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး၊ အရသာထူးကဲကောင်းမွန်လှတဲ့ စားချင်စဖွယ် အာရှနှင့် နိုင်ငံတကာ အစားအစာ ဟင်းလျာများ၊ စတိုင်ကျ ခမ်းနား ကြီးကျယ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဟိုတယ်ခန်းများအပြင်နောက်ဆုံးပေါ် စီးပွားရေးနှင့် အစည်းအဝေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများက ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ရန်ကုုန်မြို့တော်ရဲ့ အချက်အချာ ကျတဲ့ နှလုုံးသည်းအူနေရာမှာ လူကြီးမင်း တည်းခိုနားနေတဲ့ အချိန်အခိုက်အတန့်လေးကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အားအင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်စေပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး တည်းခိုနေထိုင်မှု အတွေ့အကြုံကို ခံစားရရှိစေမှာပါ။
အမှတ် ၄၅၉ ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုုန်၊ မြန်မာ။, 11041 Yangon
ဖုုန်း: +95 (1) 2305858
ဖက်စ်: +95 (1) 2305868
My experience staying here was an absolutely pleasant one. I had suchawarm welcome back & suchanice set up in the room. Suite is beautiful, spacious and clean with superb amenities. I...
One ofabest place for friends meeting
Novotel Yangon’s Gourmet Bar, Satisfied arrangement with perfect provisions services and meals! Dar Dar,astaff from there serviced best of her. Appreciate much her for that. Would like to be there...
Nice Open Mic evening
Very nice place to spendagood moment with friends and good musicians from Blue Rose Music Band. It wasagreat discovery to escape from regular life... Thanks to Shue Zin Chan Myae for the warm...
Good Feeling raining season at Novotel pool bar
When I chill at Novotel pool bar,it was raining.I loved it too much.It look like for me private paradise.Htoo Nanda is upswell to me one drink it was very good to drink with raining season.Nyi Nyi...
Hanging out at the novotal pool bar with my family. The pool is very good to swim,play and pool bar offer very good drinks and Ko NyiNyi and Ko Htoo Nanda at bar is very friendly and have very nice...
Based on 2304 user reviews
Read 2304 reviews
Address: အမှတ် ၄၅၉ ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုုန်၊ မြန်မာ။, 11041 Yangon, Myanmar
Latitude: 16.82012 - Longitude: 96.131957
to	 Novotel Yangon Max
Get directions လမ်းကြောင်းရှာရန်
အမှတ် ၄၅၉ ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုုန်၊ မြန်မာ။ , 11041 Yangon , Myanmar